Ubhadane lwenoveli i-coronavirus luyaqhubeka nokusabalala, izikhungo eziningi ze-laboratory yezokwelapha ziqala ukusebenzisa i-washer ye-laboratory ezenzakalelayo. | Xipingzhe
Ubhadane lwenoveli i-coronavirus luyaqhubeka nokusabalala, izikhungo eziningi zelebhu yezokwelapha ziqala ukusebenzisa umshini wokuzenzakalela waselebhu.
Ubhadane lwezifo olwaqubuka entwasahlobo ka-2020 lusongela impilo yaso sonke isintu. Ukuqhamuka kwenoveli iCoronavirus sekudale izifo ezingaphezu kwezigidi eziyisithupha emhlabeni jikelele. Bangaphezu kuka-300,000 abantu asebeshonile, futhi ochwepheshe abaningi abanalo ithemba lokuthi lolu bhubhane luzophela maduzane. Uma sithi isifo siyisitha saso sonke isintu, khona-ke kukhona izitha, kukhona amasosha, kukhona amaqhawe, emgqeni ongaphambili wokusindisa izingelosi ezifayo angamaqhawe, esifundweni sokucwaninga elebhu kanye nemithi yokwelapha elwa nobhubhane angamaqhawe futhi. Kodwa-ke, ukuba yiqhawe akuhloselwe ukuthi kube lula. Ngaphandle kobunzima nezingcindezi ezilethwa ngumsebenzi wocwaningo lwesayensi, ukuhlanzwa kwansuku zonke kwezinto zaselabhoratri kudinga isikhathi esiningi namandla. Futhi lokho akubheki izindleko ezifana namanzi nogesi. Kodwa-ke, isikhathi sibaluleke kakhulu esimweni seCDC.Ngakho-ke, akumangazi ukuthi njengoba i-COVID-19 iqhubeka nokusabalala, ama-laboratories amaningi ezokwelapha asebenzisa ama-washer angama-laboratory okuzenzakalelayo.
Eqinisweni, abantu abase-laboratory yesikhungo sezokwelapha kumele bahlangabezane namaphuzu alandelayo lapho behlanza izinsimbi zaselebhu, ikakhulukazi i-glassware.
1. Ukwanda kwezindleko ezengeziwe zelebhu
Kungaba nzima ngabantu ukuthi bacabange ukuthi imiphumela yokuhlolwa ingatholwa ngaphansi kwemizuzu embalwa. Kepha ukuhlanza izitsha ngemuva kwalokho kuzothatha isikhathi eside ukwedlula ukwenza isivivinyo. Kunezindleko zesikhathi esiningi kakhulu zokuhlanza imishini yaselebhu, futhi futhi kunezinye izindleko ezingezona ezabasebenzi. Ngaphezu kwalokho, phakathi nale nqubo, umuntu ohlanzayo angadala ukulahleka kwezinto zokuhlola ngenxa yokusebenza budedengu nokungahambisani nemininingwane efanele. Kungadala nomonakalo ohlukahlukene emzimbeni womuntu…
Izindinganiso zokuhlanza azikwazi ukuhlanganiswa
Kwilebhu yezokwelapha, njalo lapho wenza isivivinyo, kubalulekile ukuthola imiphumela eqondile. Ukuhlanza okwenziwa ngesandla akukwazi ukulawula ukushisa kwejubane lamanzi, futhi akunakuqinisekisa ukuhlanzeka komkhumbi. Cabanga ulinga nge-glassware engahlanzekile, njenge-Coronavirus yanoveli? Ngaphandle kwalokho, ukwakheka kwezingilazi ezahlukahlukene kuyahlukahluka, futhi ukuhlolwa okuningi kwehlulekile ngoba izitsha azihlanzwanga kahle. Ngubani ongaba nesibopho uma lokhu kuholela ekuhlolweni ekuhlolweni kwegciwane okusebenzayo kanye nocwaningo lokugoma?
Izinqubo zokuhlanza azivumelani futhi kunzima ukuziphindaphinda
Ngesikhathi kufundwa inoveli iCoronavirus, amalabhorethri amaningi anethemba lokuthuthukisa ukusebenza kwawo kahle ngangokunokwenzeka ukuze enze yonke imizamo yokunqoba ubhadane ngokushesha okukhulu. Lokhu kusho nokuthi, indawo yokuhlanza, umfutho wamanzi kanye nezinga lokushisa, inhlanzeko, okokuhlanza kanye nezinye izinkomba zidinga ukungaguquguquki. Ukuqinisekiswa okuhambisanayo kokucaciswa kokuthotshelwa kwemvelo yezempilo Lokhu kusobala ukuthi akuqinisekisiwe ukuthi i-glassware ihlanzwe ngesandla.
Ngenhlanhla, lawa maphuzu empeleni anendlela yokuxazulula, lokho ukuthenga i-wahser ye-laboratory ezenzakalelayo. Ngakho-ke yiziphi izinzuzo ezithile zomshini wokuhlanza we-laboratory othomathikhi?
I-1.Ihlonyelwe ngezinqubo ezahlukahlukene zokuhlanza, kunezindlela eziningi zokuhlanza inhlanganisela.Ukuvumelana nokuphindeka komphumela wokuhlanza: I-Glassware iyadingeka ukuthi ihlanzwe endaweni evaliwe, ngokuhlelwa okungaguquki, ingcindezi yamanzi njalo, ukuhlushwa okujwayelekile kokuhlanza kanye nethempelesha efanelekile yokuhlanza yokuhlanza okuhleliwe. Yonke ingilazi ngemuva kokuhlanzwa ngemishini iqinisekisiwe.Ngasikhathi sinye, i-glassware ehlanzwa ngomshini wokuwasha amabhodlela othomathikhi inezinzuzo zokuhlanzeka okuphezulu, ukuphindeka okuhle, ukusebenza kahle okuphezulu, nedatha yenqubo yokuhlanza ingarekhodwa ngokuhambisana nezimfuneko ze-GMP ne-FDA. Yonke inqubo yokuhlanza nekhwalithi kungalandelwa, ngokungafani nokuhlanzwa ngesandla akukwazi ukugeza ngaphansi kokushisa okuphezulu. Ukusebenza kohlelo oluvaliwe ngempumelelo kuvikela impilo yomsebenzisi.
Umsebenzi wokuqala we-2.Have nomsebenzi wokuhlanza isikhathi. Yonga amanzi nogesi, imvelo.
3.Clean basket rack belt ukuvikela ukumboza, ukumelana nokugqwala, ukwanda kwempilo yesevisi.
4.Ngokusebenza kwepompo ye-ejenti yokuhlanza ekutholeni komoya, ukubalwa okunembile kokuhlanzwa kokuhlushwa
5.ICA module design, exchange free of basket stand, coupled positioning;
Ubuchwepheshe bokubeka umnyango wokungeniswa kwe-6.ITL, ukubeka ukunwebeka kwe-buckle okuzenzakalelayo.
7.Ngomsebenzi wokuhlonza isitendi sebhasikidi, ungonga amanzi, ugesi, izinto ezisetshenziswayo, ukusebenza kahle nezinye izindleko ngempumelelo.
Kungabikezelwa ukuthi umshini wokuhlanza we-laboratory othomathikhi unganciphisa umthwalo womsebenzi welabhorethri, ngokuqinisekile kuzobasiza ukuthi bagxile ekuqiniseni ucwaningo ngegciwane nasekuthuthukiseni ukunemba nokusebenza kahle kocwaningo. Lapho-ke usuku lokunqoba kwethu kokugcina ekulweni nobhadane alusekho kude!
Isikhathi Iposi: Jun-22-2020